Laser Focus neLens ZnSe
Kugadzikana: The zvinoyerera chubhu chakagadzirwa vaitenga regirazi frit kubva kuGermany, uye kunaka girazi yose chubhu iri controllable. Power: US hollyland zvachose magirazi uye goho nezvionioni anoshandiswa. The soro simba riri 190 watts or, uye goho simba arambe achirema riri kumusoro. Long upenyu: The zvinoyerera chubhu zvinenge zvakazara anowedzera, pamwe chete electrode kubatwa rakasiyana muitiro, inoita zvinoyerera yakatsiga zvikuru uye upenyu basa iri kusvika maawa 10,000. Spot: Muchitevere mhango mamiriro, pfungwa, ST ...
Kugadzikana: The zvinoyerera chubhu chakagadzirwa vaitenga regirazi frit kubva kuGermany, uye kunaka girazi yose chubhu iri controllable.
Power: US hollyland zvachose magirazi uye goho nezvionioni anoshandiswa. The soro simba riri 190 watts or, uye goho simba arambe achirema riri kumusoro.
Long upenyu: The zvinoyerera chubhu zvinenge zvakazara anowedzera, pamwe chete electrode kubatwa rakasiyana muitiro, inoita zvinoyerera yakatsiga zvikuru uye upenyu basa iri kusvika maawa 10,000.
Spot: Muchitevere mhango mamiriro, pfungwa, kugadzikana, hwakanaka, dzakafanana gwapa muenzaniso uye yakakwirira kunyatsoshanda.
Process: The chigadzirwa nomoto mutsetse iri zvachose chisimbiso mune zvedongo mvura bhachi, insulating chose mhepo, zvinobudirira pasave mukuru-kumanikidzwa sparking.
The Laser chubhu girazi anovandudza mvura-dzaserera zvedongo mvura bhachi, uye goho girazi riri vachiwirirana pamwe yemhangura mvura bhachi mvura kutonhora hurongwa, iyo zvinobudirira kunoderedza izvo tembiricha kwazvo kunowedzera upenyu basa Laser chubhu.
Electrode pamusoro, rinokosha yakanamirwa pamifananidzo! --The electrode pamusoro kurapwa adopts chaiyo simbi yakanamirwa pamifananidzo kubvisa remagetsi sputtering uye kusvibiswa izvo zvachose, zvinobudirira pakukoka upenyu basa Laser chubhu. Front uye shure izvo kutonhora pakavha, rinokosha ndege! - Heat-achinyangarika pabutiro pamusoro oxidation muitiro, mukuru-kushanda kuputira waivako, achidzikisa sparking kubuda.
mhando Length (mm) Dia (mm) Rated Power (w) Max simba (W) Current (MA) tiwedzere
B20 1250 ± 20 Φ60 ± 2 80 95 28 Ehe
B21 1250 ± 20 Φ80 ± 2 80 95 28 Ehe
B40 1450 ± 20 Φ60 ± 2 100 120 30 Ehe
B41 1450 ± 20 Φ80 ± 2 100 120 30 Ehe
B60 1650 ± 20 Φ60 ± 2 130 150 30 Ehe
B61 1650 ± 20 Φ60 ± 2 130 150 30 Ehe
CO2 Laser chubhu Character
I .kushanda ezvinhu
Water kutonhora: kushandisa mvura Yakanatswa, mvura tembiricha: 10 ℃ -40 ℃.
The kushanda zvakatipoteredza: tembiricha 2-40 ℃; mwando 10-60%.
Kushanda ano: Maximum anoshanda Kuyerera 32mA. Inoyerera razvino inofanira kuchengetwa pazasi 30mA. Tube upenyu anogona kusvika maawa 10,000 kana magetsi wakachengetwa pazasi 28mA. The ammeter inofanira kwakabatana kune akaipa electrode pamusoro Laser tube.When riri kushanda pasi pamusoro-soro iyezvino kwenguva refu, akaipa danda achawana yepepuru uye upenyu achatapudzwa nokukurumidza.
Kuti adzivirire guruva kupinda kuputira mumuhara, ndapota putira pamwe epurasitiki firimu.
II . kushanda Performance
Regai wachenesa panze pemvura goho chirikadzi negirazi munowanika tampon; vachange zvikasadaro goho simba zvikuru. The Followings ndivo akasarudzwa nzira kuchenesa kusvibiswa iri panze pemvura hwindo girazi:
1) Kana girazi rinamakwapa, regai pamusoro Laser.
2) Ridzai girazi pamusoro padivi aine mhepo blower.
3) mwaya yakachena doro riri girazi huri pamwe sprayer.
4) Dzokerai pamusoro Laser mushure doro akaora zvakazara volatilized.
5) Kana nzira kumusoro haashandi zvinobudirira, zvakakodzera kubvunza kuti nyanzvi yokushandisa tampon pamwe doro kuchenesa girazi pamusoro kubva pakati kusvika kumucheto. The chinetso ndechokuti kudzivirira hwindo rurege kusvibiswa.
Attention: nayo chinorambidzwa kuchenesa negirazi acetone.
The sikuruu iri mberi uye shure kumagumo Laser chubhu haabvumirwi kuzununguswa, zvimwe ari panze simba achaparadzwa wapera, kunyange chubhu zvichabviswa scrapped.
Isa acryl 300mm kure goho girazi, kana kuedza Laser pachivara.
The Laser danda riri chiedza asingaoneki. Ndapota vanopfeka unodzivirira magirazi apo debugging ari Laser. The zvakanaka danda riri kumusoro voltage. Nyatsoteerera kuchengeteka mavanga.
V. Dururirai kutonhora mvura iri huye kuchengetwa uye zvokufambisa, nokudzitira goho chinouraya neguruva-uchapupu epurasitiki bhegi iri. Kuchengetera zvakatipoteredza 2-40 ℃, uye akakumbira mwando ndiyo 10-60%. Rongedzai kuti Laser sezvinoitwa epakutanga way.Important manotsi: tinokumbira kuumba mashoko chipanji pamwechete Laser chubhu kurambidza chubhu vertically zvishoma nezvishoma mumatope panguva chokufambisa. The chipanji kudivi goho girazi anofanira 70 mm mhiri nayo, uye chipanji kudivi kuratidza girazi anofanira kuva mm 50 vakwanise.
1000w akatungamirira Flood Light With Ies File
150w Cobra Head akatungamirira Street Light
150w akatungamirira 50w Street Lights
150w akatungamirira Street Lamp Ies File
260w Sharpy Kufambira Light Head
Hd Mini Kwakaita 3d purojekita 1080p
Ies File For 60w akatungamirira Street Lights
Jewelry Laser Chichatara Machine
Akatungamirira 3d purojekita
Akatungamirira Cast Light
Akatungamirira kwepfumo Light For Beauty Skin
Akatungamirira Sport Field Lighting
Akatungamirira Street 60w With Photocell
Mini DV With Waterproof Case
Mini Gold Laser Chichatara Machine
Mini Yakavanzwa Dash Camera
Mobile Phones With akatungamirira Flash Digital Camera
Professional Fiber Laser Chichatara Machine
Solar akatungamirira Street Light
Strong Pom kumumvuri
UFO akatungamirira High Bay Light
UFO akatungamirira High Bay Light 150w
UFO akatungamirira High Bay Light Switch 200w
CO2 Laser chubhu
How kusarudza CO2 Laser chubhu
Material: kumboda CO2 Laser chubhu ine regirazi chubhu (kusanganisira kubuda chubhu), girazi, mvura-c ...
Types uye akasiyana Laser lenses
Laser kuisa mirror.There mhando mbiri mudzimba uye kutorwa tichifunga magirazi. The tra ...